Finday sy Internet any Thailand ~ Journey-Assist - Mpanentana
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Finday sy Internet any Thailand
Fifandraisana amin'ny Internet sy finday any Thailand. Mpandraharaha finday
Namboarina tsara ny Internet sy ny serasera finday ao amin'ity firenena ity. Afaka mampiasa Internet, serasera finday eto an-toerana sy finday iraisam-pirenena manokana ny mpitsidika mba hifandraisana amin'ny fireneny na any an-tany Thailand. Fa ny mpandraharaha finday mihetsika ao amin'ny fireneny ary miantso avy amin'ny efitrano fandraisam-bahiny dia lafo be. Tsy ampiasaina ny fampiasana Internet Internet an'ny mpampiasa finday eto an-toerana amin'ny fanaovana roaming. Tsara kokoa ny mividy karatra SIM-mpizahatany manokana an'ny mpandraharaha finday Thai.
Fomba ahazoana karatra SIM any Thailand
Thailand mobile operator
Recharge finday any Thailand
Internet any Thailand. Wi-Fi azo tanterahina
Ny Internet dia na aiza na aiza. Ny Wi-Fi maimaim-poana dia azo saika ny trano fandraisam-bahiny na trano fandraisam-bahiny na trano fandraisam-bahiny na hotely. Tsy fahita firy intsony amin'ny hotely mihodina no andoavana izany. Raha tsy manana ny fitaovanao manokana handray Wi-Fi ianao, any amin'ny hotely sasany dia misy fidirana amin'ny Internet tariby (toy ny fitsipika, ao amin'ny lobby hotely, tsy dia matetika loatra amin'ny efitrano). Ny Wi-Fi maimaim-poana dia misy any amin'ny toeram-pivarotana lehibe maro, ao amin'ny McDonalds, trano fisakafoanana ary na trano fisotroana kely aza.
Eny an-dalambe amin'ireo tanàna Thailandey dia afaka mahita klioba informatika sy kafe Internet. Ny vidiny matetika dia isan'ora ary miovaova amin'ny karazany 20-60 baht isan'ora. Na izany aza, tsy ao amin'ny andrim-panjakana iray toy izany dia afaka mampiasa Skype ianao, satria tsy aiza na aiza misy fakantsary horonantsary sy mikrô. Mbola any amin'ny toerana toy izany matetika dia misy an-tariby izay ahafahana miantso antso iraisam-pirenena IP an-telefaonaary koa ny fandefasana fax.
Ny fandehanana amin'ny firenenao na ao Thailandy dia lafo be. Ny safidy mora kokoa sy mora kokoa dia ny hividy karatra SIM amin'ny mpandraharaha Thailandey. Ny antso an-trano dia baht vitsy isan-tsegondra. Ny antso ao Thailandy dia mitentina eo ho eo ny salanisa 1 baht isa-minitra.
Ny karatra SIM an'ny mpandraharaha Thailandey dia mora vidy eo amin'ny seranam-piaramanidina rehefa tonga. Manana seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Thailand rehetra mijoro amin'ireo mpitaky finday rehetra amin'ny fivoahana ao amin'ny efitrano fahatongavan'ireo. Aza mandeha lasa :).
Mazava ho azy fa afaka mividy karatra SIM ianao amin'ny fivarotana finday
Ao amin'ny tsenambarotra "7-Eleven"Na"Family mart“Hita izany isaky ny dingana any amin'ny tanànan'ny mpizahatany.
Ny tarehin-javatra azo ampiharina dia azo jerena mialoha amin'ny alàlan'ny tranokala ofisialin'ny mpandraharaha (ho ambany ny rohy mankany amin'ny drafitra tariff, ary koa amin'ny lisitry ny ilany havanana).
Ny ilaina hividianana karatra SIM fotsiny dia ny mamaritra ny tarika, ny pasipaoro, ny fandoavam-bola, ary ny fifandraisana ilaina sy ny fampahavitrihana rehetra dia hatao ho anao.
Ireo mpandraharaha finday lehibe any Thailand - AIS One-2-Antso, Finday marina и Dtac.
Ny safidin'ny mpandraharaha finday, mazava ho azy, fa ny statistika dia mampiseho fa ny mpitsidika mpizahatany malaza indrindra dia mpandraharaha finday DTAC (diTac). Fa tsy maintsy miaiky ianao. izany fonony ary miantso kalitao mitovy daholo ny mpikirakira rehetra any Thailandy.
Fa. Raha mikasa ny hitsidika ny efitr'i virjin'i Thailand ianao mandritra ny dia, dia tsara kokoa raha manana karatra SIM roa avy amin'ny mpandraharaha samihafa arahin'izy ireo.
Drafitra fandefasana azo jerena ny lohahevitra eto
Ny sandan'ny karatra SIM miaraka amin'ny tarika efa nampidirina isaky ny tsirony, hitanao eto
AIS amin'ny famenenana an-tserasera.
Adiresy amin'ny salon eto
Fantaro ny nomeraonao, kitiho ary apetraho ny fifandanjanao AIS (One-2-Call).
Ny fandanjalanjana - * 139 #
Fantaro ny nomeraonao - * 545 #
Fampiasana karatra SIM vaovao - 900120
Top-up miaraka amin'ny karatra fiomanana - * 120 * code ambony ambony #
Ampidiro ny GPRS - * 129 * 1 #
Ampiasao ny GPRS - * 129 * 2 #
Toerana serivisy GPRS - * 129 #
Tena finday (TrueMove)
Rehefa mividy karatra SIM dia mila mamerina azy ao anaty fonosana tadiavina, avy eo mampifandray azy.
tariff entana 4GAzo jerena ny Internet eto.
Ny karatra SIM dia mendrika 49bat
Tena Fandehanana amin'ny Internet
Fantaro ny nomeraonao. Hamarino ary avereno tohiny ny fifandanjana TRUE Move
Fandanjana ambony: * 123 * isa avy amin'ny karatra ambony-ambony #
Fandanjana: # 123 #
Fantaro ny nomeraonao: * 833 #
Renou TrueMove SIM Card:
Mandritra ny 30 andro: * 934 * 30 # - vidiny 2 baht.
Nandritra ny 90 andro: * 934 * 90 # - ny vidin'ny 6 baht.
Nandritra ny 180 andro: * 934 * 180 # - ny vidin'ny 12 baht.
Betsaka amin'ny tarany. Faharetana samy hafa, hafainganam-pandeha hafa, fifamoivoizana samy hafa. Tsara raha mifankafantatra mialoha izy ireo ary mifidy ho anao. Ny drafitra amin'ny Tariff sy ny toetrany dia hita eto
Sim card Fizahantany sambatra na Super 4G SIM dia sarobidy 49bat
tariffs - DTAC (diTac)
Fantaro ny nomeraonao. Hamarino ary avereno tohiny ny fifandanjana DTAC
Fandanjana ny fandanjalanjana - * 101 * 9 #
Fantaro ny nomeraonao - * 102 * 9 #
Top-up miaraka amin'ny karatra fiomanana -
* 100 * CardSerialNo. CardIDNo. ​​#
Diniho raha misy promo - * 103 * 9 #
Serivisy "Antsoy aho hiverina" -
* 114 * 10_called_number of subscriber_number * 9 #
Manitatra ny fananana karatra SIM:
Mandritra ny 30 andro - * 113 * 30 # dia hasaina 2 baht
Mandritra ny 90 andro - * 113 * 90 # dia homena 6 baht
Mandritra ny 180 andro - * 113 * 180 # dia homena 12 baht
Ahoana ny fomba recharge finday any Thailand
Ny fomba tsotra indrindra - mameno ny birao ao amin'ny boaty ao amin'ny minimarkets "7-Eleven"Na"Family mart". Antsoy ny mpamatsy anao, ny habetsahana hatsangana sy ny isa an-telefaona averina. Nandritra ny fotoana ela dia tsy miasa foana amin'ny fomba fiasa ity fomba ity AIS One-2-Antso
Somary henjana ihany, ity no fomba taloha hividianana karatra recharge. Amidy na aiza na aiza amidy am-bavan'ny SIM. Ao amin'ny karatra ny torolàlana momba ny fampiasana ny karatra recharge.
Azonao atao ny misintona an-tserasera, amin'ny alàlan'ny tranokalan'ny mpanome tolotra. Ireo rohy amin'ny famerenana toy izany dia aseho etsy ambony sy amin'ny lafiny eto amin'ity pejy ity.
Mety hahasoa anao ny kajy calculator converter vola. Mandrohy hatrany izany.
Ny mpanova dia kajy vola. Ny dolara any Thailand
Fifandraisana amin'ny trano iray avy any Thailand
Ny fiantsoana an-trano amin'ny telefaona finday raha any Thailand dia azo atao amin'ny fomba mahazatra - amin'ny alàlan'ny fidirana ny kaody ao amin'ny firenenao, ny laharan'ny tanàna ary ny isan'ny tanàna, fa ny antso toy izany dia lafo be. Tsara kokoa noho ny antso an-telefaona finday avy any Thailand amin'ny alàlan'ny kaody IP-telephony. Amin'ity tranga ity dia mitaky 3 baht isan-minitra ny fiantsoana. Ny mpandraharaha samihafa dia misy vidiny sy kaody samihafa (na dia somary miovaova aza ny vidiny), noho io antony io dia tokony hanazava tsara ny tariff sy ny kaody manokana an'ny mpandraharaha iray ianao amin'ny fotoana anaovana ny fividianana na eo amin'ny tranonkalan'ity operator ity.
Fa amin'ny ankapobeny, raha toa ka misy ny lalana eo amin'ny andaniny sy ny lafiny roa, ny fomba tena mahasarika indrindra amin'ny fanaovana antso dia amin'ny alàlan'ny iraky finday izay manohana ny serasera. (Viber, Skype, WhatsApp, sns).
Zava-dehibe iray manan-danja: karatra SIM tsotra an'ny mpandraharaha finday Thai dia manana fotoana voafetra. Noho izany, raha mikasa ny hampiasa isa iray mandritra ny fotoana maharitra ianao dia mila manitatra ny maha-manan-kery ny karatra. Amin'ny vidiny fanampiny izany.
Tena finday (tena mihetsika)
Hamarino ny fifandanjan'ny telefaona
TRUE Move - # 123 #
AIS - * 121 #
Alao ny nomeraonao
DTAC - * 102 * 9 #
TRUE Move - * 833 #
Rehefa mifidy laharana iraisam-pirenena avy any Thailand fa tsy "+" dia mila miantso ireo kaody - 004, 009, 006.
Ny Code 004 dia miara-miasa amin'ny DTAC (Sambatra).
Kode 006 miaraka amin'ny TrueMove.
Kode 009 miaraka amin'ny mpandraharaha AIS (1-2-antso).
izany hoe raha manana karatra SIM an'ny mpandraharaha Thai DTAC ianao, ary te hiantso an'i Rosia ianao, dia antsoy ny laharana toy izao: 004-7-901-xxx-xx-xx
Super! Misaotra! Inona no ilainao!